ESI KWALITE POWERPOINT - EKEMEKE - 2019
Ugbu a, a na-ekesa ọtụtụ kalenda akwụkwọ, nke a na-eme site na iji mmemme pụrụ iche. Ọ dị mfe na ngwa ngwa. Ma ọbụna onye ọrụ nkịtị nwere ike ịmepụta akwụkwọ nke ya ma bipụta ya na ngwa nbipute. Ọdịdị nke kalenda ahụ bụ nanị site n'echiche gị. Maka nke a, usoro Tkexe Kalender zuru oke, nke anyị ga-atụle n'isiokwu a.
Mgbe ị na-amalite usoro ihe omume ahụ, ị ​​na-ahụ windo dị otú ahụ n'ihu gị. Na ya, ịnwere ike imeghe oru ma ọ bụ mepụta ndị ọhụrụ. A na-egosipụta faịlụ ikpeazụ emepe na listi. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe mbụ ị maara na ngwanrọ a, nweere onwe gị ịpị "Mepụta Ọhụrụ Njikwa" ma gaa na-atọ ụtọ.
Tkexe Kalender nyere onyinye nke ọtụtụ ndebiri ejikere. Maka ihe mgbaru ọsọ gị dabara otu n'ime ha. O nwere ike ịbụ kwa afọ ma ọ bụ kalenda maka ọnwa, izu. N'elu aka nri gosipụtara echiche ziri ezi nke template ahụ, mana enwere ike ịgbanwe ya kpamkpam mgbe ị nyochara. Họta blank kwesịrị ekwesị wee gaa window ọzọ.
Kalịnda peeji nke
Ọ dị ezigbo mkpa iji setịpụ ihe niile n'ụzọ ziri ezi ka o wee pụta ìhè mgbe ị na-ebi akwụkwọ. Họrọ otu n'ime usoro, eserese ma ọ bụ ebe ọdịda anyanwụ, ma kwagharịa ihe mmịfe ahụ iji chọpụta ezigbo ihu akwụkwọ. Ị nwekwara ike ịhazi ntọala ibipụta na windo a.
Ugbu a ịkwesịrị ịhọrọ oge ọ ga-egosi kalenda gị. Tọọ ọnwa ma họrọ afọ. Ọ bụrụ na akọwapụtara ya n'ụzọ ziri ezi, usoro ahụ ga-agbakọ ụbọchị niile n'ụzọ ziri ezi. Biko rịba ama na ọnọdụ a ga-adị njikere ịgbanwe mgbe e mesịrị.
Maka ụdị kalịnda ọ bụla, ọtụtụ blanks dị. Họrọ otu n'ime ha nke kachasị mma ga-adabara echiche gị. Dị ka nkọwa nke ụdị, a na-egosipụta thumbnail na nri. Nke a bụ nhọrọ ikpeazụ na ọkachamara ọkachamara ngo. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmegharị ederede.
N'ebe a, ị nwere ike ịgbaso echiche nke ọrụ gị, site na ebe a ị nwere ike ịga na menu na ntọala dị iche. N'elu na e nwere ọtụtụ ngwá ọrụ bara uru: imezigharị ihe, ịhọrọ peeji nke, eziga ka ibipụta ma gbanwee ọnụ ọgụgụ. Pịa aka nri na otu ihe iji gbanwee ya.
Ihe kachasị mkpa dị n'etiti kalenda ndị a - oyiyi mbido na ibe. A na-arụ ọrụ site na windo dịpụrụ iche, nke nwekwara ihe niile dị mkpa: ntinye mgbakwunye, resizing na akara ala. E nwere ike itinye ihe osise na ibe ọ bụla ka ha dị iche na ibe ha.
Enwere ezigbo ihe nchọgharị oyiyi nke ga-enyere gị aka ịchọta faịlụ ị chọrọ. Foto niile dị na folda ahụ ga-egosipụta dị ka thumbnails, onye ọrụ nwere ike ịhọrọ foto achọrọ maka bulite.
Ọ bara uru ịṅa ntị na mgbakwunye agbakwunyere, n'ihi na ọ ga-enyere onyinyo ahụ aka ile anya na kalenda. Na nchịkọta nhọrọ a, ị nwere ike ịhazi ụcha, nhazi, gbakwunye ma dezie textures dị mkpa. Enwere ike ime nke a na ibe nile nke oru ngo.
Usoro ihe omume ahụ na-enye ohere ịde akara ụbọchị ezumike. A na-ekewa ha n'ime ìgwè dị iche iche. A ghaghị itinye ụbọchị uhie ọ bụla iche site na ndebiri. A na-emepụta ememme ọhụrụ site na nchekwa data ahụ, ebe nchekwa na-egosipụta na windo a.
Nkọwapụta nke ọnwa
Ọ dị mkpa na ụbọchị, izu na ọnwa dị mma ma dị mfe ile. A na-ahazi ha site na windo a họpụtara. N'ebe a, onye ọrụ ahụ nwere ikike iji hazie nhazi nke ọ bụla n'ụzọ zuru ezu, ma ọ bụ naanị họrọ template dị njikere site na ndị a zoputara.
Ọtụtụ mgbe na kalenda ha na-ede ihe odide dịgasị iche iche na ụbọchị ezumike dị mkpa ma ọ bụ jiri ozi ndị ọzọ bara uru. Tkexe Kalender nyere nke a. Ọnọdụ ederede zuru ezu dị na windo dị iche. Ị nwere ike ịhọrọ fon, nha ya, họta ubi, gbanwee ọnọdụ ahụ.
Asụsụ asụsụ Russian;
Nnukwu nhọrọ nke ndebiri na blanks;
E nwere ọtụtụ kalenda.
N'oge a na-anwale, a chọpụtara na ụkọ ego Tkexe Kalender.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta kalenda nke onye edemede gị, nke a ga-achọ mma nke ọma, anyị na-akwado iji usoro a. Ya na ya, usoro a ga-adị mfe ma na-atọ ụtọ. Ọnụnọ nke ndebiri ga-enyere aka ịmepụta ọrụ ọbụna ngwa ngwa ma dị mma.
Download Tkexe Kalender maka n'efu
Mmemme maka ịmepụta kalenda Dg Foto Art Gold Roofing Pro Esi etinye ihe ngosi na desktọọpụ gị
Tkexe Kalender bụ usoro n'efu nke na-enyere gị aka ịmepụta kalenda gị. Ọrụ ya gụnyere ihe atụ agbakwunyere, ederede, edezi edezi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Onye Mmepụta: TXexe
https://termotools.com ig.termotools.com © Ekemeke 2019